अन्तत् ३८ क्विन्टल सुनकाण्डमा गोरे जेल चलान : के छ गोरेको बयानमा ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १४, २०७५ समय: ६:५९:१३
विराटनगर । करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण र उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्याका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती ’गोरे’ पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् ।
जिल्ला अदालत मोरङमा लिइएको चार दिनको बयान र आइतबारको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजालसले उनलाई कारागारमा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो । चार दिन लगाएर ३७ पृष्ठको बयान आइतबार दिउँसोसम्म गोरेले अदालत समक्ष दिएपछि सोही दिन थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश आएको जिल्ला अदालत मोरङका निमित्त श्रेष्तेदार केदारप्रसाद गौतमले जानकारी दिएका छन ।
गोरेलाई संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ४१ तथा मुलुकी ऐन अब. ११८ देहाय २ का आधारमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको मोरङ अदालतले जनाएको छ । सनम शाक्यलाई यातना दिएको श्रव्यदृश्य, पक्राउ परेका अन्य अभियुक्तहरूको बयान र गोरेकै बयानका आधारसहितको प्रमाणमा उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिइएको हो । बयान सकिएपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस भएको थियो । वादीका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङ विराटनगरका मुख्य न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक र सहन्यायाधिवक्ता रोहित पोखरेलले बहस गरेका थिए । वादीका तर्फबाट सरकारी वकिलहरूले बहस गरेपछि प्रतिवादी गोरेको तर्फबाट कानुन व्यवसायी यामबहादुर मगरले बहस गरेका थिए ।
मगरले गोरेको पक्षबाट ४१ मिनेट मात्र बहस गरे । गोरे जेठ ८ मा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका दिन उनलाई हवाई मार्गबाट विराटनगर ल्याएर सोही दिन अबेर जिल्ला अदालत मोरङमा पेस गरिएको थियो । कडा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी गोरेको बन्द इजालसमा बुधबारदेखि बयान लिन सुरु भएको थियो । उनको बयान सकिन चार दिन लागेको हो । गोरेले अदालत समक्ष दिएको बयानमा सुुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेका छन् तर आफू नाइके नभएको उनको दाबी छ । ३७ पृष्ठ लामो बयानमा उनले सुन तस्करीबारे धेरै कुरा खोलेका छन् ।
गोरेका अनुसार तस्करीको सुन भारतमा जान्थ्यो र लगानीकर्ता पनि भारतीय नै हुन् । धरानका सुन व्यापारी सुनिलकुमार अग्रवाल, कृष्ण अग्रवाल लगायतले पनि सुनमा लगानी गरेको र नेपालमा तस्करीको धन्दा चलाउने छिरिङ वालेङ घले भएको उनको बयान छ । आफूले भरियाहरूको सेटिङ मिलाउने गरेको भन्दै गोरेले छिरिङकै लाइनमा बसेर सुन ओसार पसारको कारोबार गर्ने सामान्य मानिस मात्र भएको जिकिर गरेका छन् । उनका अनुसार छिरिङले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्याम खत्रीसँग विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउने गरेका थिए । सुन तस्करी गर्ने कार्य प्रहरीका उच्च अधिकारी र राजनीतिक पार्टीका ठूला मानिसको मिलेमतोमा हुने उनले बताएका छन् ।
गोरेले अदालतमै त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउन खत्रीको मूख्य भूमिका रहेको बयान दिएका छन् । फ्लाई दुबईबाट एक पटकमा १५ देखि २० किलोसम्म सुन आउने गरेको भन्दै उनले दुबईबाट भरियामार्फत् झोलामा सुन आएपछि भरियालाई प्रहरीले पास उपलब्ध गराउने र चेकजाँच नभई सुन खत्रीको कोठामा पुगेर बाहिरिने गरेको बताएका छन् । गोरेका अनुसार खत्रीले आफ्ना ड्राइभर र अंगरक्षकलाई प्रयोग गरेर सरकारी गाडीमा नै सुन बाहिर ल्याउँथे । खत्रीले सुन बाहिर निकाले वापत प्रतिकिलो ५० हजार रुपैयाँ लिने गरेको भन्दै उनले उनकै सहयोगमा ५०० किलोसम्म सुन आएको गोरेले बयानमा स्वीकार गरेका छन् । गोरेको बयानलाई आधार मान्ने हो भने खत्रीले ५०० किलो सुन पास गराउँदा साढे दुई करोड रुपैयाँ बुझेका छन् ।
छानविन समितिको अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको खातामा पनि खत्रीलाई एक करोड बढी रकम दिएको पाइएको थियो । खत्री अहिले फरार छन् । छानविन समितिले बयानका लागि बोलाए पनि अनुपस्थित भई फरार भए । उनलाई पक्राउ गर्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रहरी संगठनमा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने तयारी छ । उनी तिनै प्रहरी अधिकारी हुन, जो यसअघि दुबईबाट आएको ३४ किलो सुन काण्डमा पक्राउ परेका थिए तर पछि उनलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो । गोरेले प्रहरीसँग शव लुकाउने ‘डिल’ भएपछि भारत छिरेको खुलाएका छन् । बयानमा गोरेले सनमको हत्यापछि शव व्यवस्थापन गर्न प्रहरीसँग दुई करोड रुपैयाँको डिल भएको तर प्रहरीमाथि भर नलागेपछि भागेर कोलकाता पुगेको बताएका छन् ।
गोरेका अनुसार उनले सुरुमा भारतीय तस्करहरूको समूहले साथीको हत्या गरेको भनी अपराध महाशाखाका प्रहरीलाई बताएका थिए । सहयोग माग्दै चिनजानका सई बालकृष्ण सञ्जेललाई फोन गरेको र उनले अरू हाकिमसँग कुरा गरेपछि शव व्यस्थापन गर्न प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रजित केसीको नेतृत्वमा टोली पूर्वतर्फ आएको बताएका छन् । बाटोमा डिएसपी केसीले फोन गरेर लाश व्यवस्थापन गरिदिएवापत दुई करोड रुपैयाँ पैसा माग गरेको गोरेले बताएका छन् । सई सञ्जेलले समेत त्यसबारे कुरा गरेको उनी बताउँछन् । ‘घटनाको जिम्मा टेकराज मल्लले लिने, शव जंगलतिर कतै राखेर मृतक परिवारलाई खबर गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने र टेकराजलाई निश्चित रकम दिने सहमति भयो’, उनी भन्छन, ‘त्यसवापत प्रहरीलाई दुई करोड दिने कुरा भएको थियो ।’